Soo Laabashada Inter, Ganaaxa Laga Cafiyay Milan, Kororka Tikidhada Juventus, Xaaladaha Quman & Kuwa Aan Qummaneyn Ee Serie A-da Oo La Faah-Faahiyay Kadib Imaatinka CR7. | Sahan Media Group
Soo Laabashada Inter, Ganaaxa Laga Cafiyay Milan, Kororka Tikidhada Juventus, Xaaladaha Quman & Kuwa Aan Qummaneyn Ee Serie A-da Oo La Faah-Faahiyay Kadib Imaatinka CR7.
Marka uu dhamaado fasaxa uu ku qaadanayo meel ka baxsan talyaaniga, Cristiano Ronaldo ayaa markii ugu horreysay la tababaran doono saaxiibadiisa cusub ee Juventus, waana kooxda burburisay horyaalka Serie A-da maadaama ay 7-jeer oo xiriir ah u dabaal dagtay, sidoo kalana Massimiliano Allegri ayaa jooga oo afar jeer kooxda u hogaamiyay labaaley koobab ah.
Jamaahiirta Juventus waxey rajeynayaan iney sii wadaan dhibaatada ay ku hayaan kuwa kasoo horjeeda, sidoo kalana waxaa la filayaa in horyaalka Serie A-da uu noqdo kan labaad ee lacagaha ugu badan suuqa ku bixiyay kadib horyaalka Premier League.
Waxey durba dhaafeen lacagahii ay sanadkii 2017 ku bixiyeen oo lagu sheegay 830 Malyan oo Euro, waxeyna haatan sii marayaan 833 Malyan oo Euro, kaliya Bianconerri ayaana suuqa ku bixisay adduun dhan 222 Malyan oo Euro.
Isku celcelis ahaan jamaahiirta Juventus ee soo xaadira garoonka Allianz Stadium waxaa lagu sheegay fasalkii hore 24,784, waana 64.84% sida lagu daabacay website-ka Transfermarket, balse haatan durba 94.8% ayaa la filayaa maadaama 29,300 qofood ay iibsadeen tikidhada sanadlaha ee kooxda.
2.68 ayaa kulankiiba ka dhalanayay Serie A-da fasalkii hore waana in aad ugu dhaw La Liga oo lagu sheegay 6.69, Carlo Ancelotti oo hogaaminaya Napoli ayaana doonaya inuu hogaamiyo shaqsiyaadka cidiyaha ku dagaalami doona si ay Juventus uga hor istaagaan horyaalka markii 8-aad.
Xaaladdaha Fiican Ee SERIE A-DA
Inter Milan-ta cusub
Inter Milan iyadoo ka hoos ciyaareysa Luciano Spalletti ayey qaaday tallaabo qurux badan maadaama ay lix sano kadib dib ugu soo laabteen Champions League, sidoo kalana Neroazzurri waxey kooxda kusoo dareen ciyaartoy muhiim ah sida: Radja Nainggolan, Lautaro Martinez iyo Stefan De Vrij.
Napoli Oo ku dhinac ah Ancelotti
Maurizio Sarri ayaa ka baxay Napoli waxaana badalay Carlo Ancelotti kaas oo doonaya inuu bilaabo waayo cusub oo kooxda ah maadaama macalinka Blues ee haatan uu saddex sano soo maamulay, Carlito wuxuu waayay Jorginho balse badalkiisa wuxuu ka dhigay Fabian Ruiz.
Inkastoo ay gaareen Semi Final-ka Champions League fasalkii lasoo dhaafay hadana isbadal badan ayaa kooxda ku dhacay, waxey ogolaadeen bixitaanka Allison Becker (Liverpool) iyo Radja Nainngolan (Inter Milan), balse waxaa kooxda kusoo biiray Javier Pastora iyo Justin Kluivert.
Cafiskii Ac Milan
Milan ayaa laga cafiyay ganaaxii laga saaray koobka UEFA Europa League kadib markii xiriirka qaaradda yurub ee UFA ay ku eedeeyeen iney jabiyeen xeerka dhaqaale wanaagga, balse Maxkamadda Cadaaladda Isboortiga ee CAS ayaa go’aankaas laashay kadib markii ay warqad racfaan ah gudbisay kooxda ka dhisan garoonka San Siro.
Lacagaha Muuq Baahiyayaasha
Fasal ciyaareedka bilaaban doona waxaa la rajeynayaa iney waqti cusub u noqoto kubadda cagta Italy, iyadoo daqliga laga helo talafashinada uu noqon doono mid saa’id ah, qiyaastii 1.1 Bilyan ayaa lagu kalsoon yahay hadii gunnooyinka ay noqdaan kuwa la hantiyo halka fasalkii lasoo dhaafay uu ahaa 942 Malyan oo Euro.
Sky iyo DAZN ayaa iibsaday xuquuqda, iyadoo dakhliga soo gala si siman loogu qeybinayo kooxaha (50%) inta kalana waa wax ku xiran natiijada iyo sidoo kale tirada daawashada.
Waxyaabaha aan wanaagsaneyn ee Serie A-da
Parma iyo Chievo oo qatar ku jira:
Iyadoo Chievo ay gali doono xaalad dhaqaale, ayaa hadana Parma lagu soo eedeeyay iney natiijo go’aamin lasii ogyahay ugu soo baxday Serie A-da, waxaana lagu soo warramay in la helay caddeymo muujinaya fariimo ay is dhaafsadeen ciyaartoyda kooxdaan iyo kuwa Spezia.
Qaar kamid ah madaxda dowlad goboleedyada oo Kismaayo gaadhay